I-HEECHI Mint Blast Non-Nicotine HNB Herbal Stick
I-Herbal Nicotine Stick
I-Herbal Nicotine Free Stick
I-HEECHI Tangerine Peel Nicot...
I-HEECHI I-Nicotine Evamile HNB...
I-HEECHI I-Blueberry Nicotine H...
I-HEECHI Mint Blast Nicotine ...
I-HEECHI Mint Blast Non-Nicot...
Izithako: I-Herbal Grabules, Isitshalo Semvelo, I-Vegetable Glyverol, i-Propylene Glycol
Isikhathi sewaranti: Izinyanga ezingu-12
Isicelo: Sebenzisa idivayisi yokushisa engashisi
I-HeeChi Heat-Not-Burn (HNB) I-Herbalstick iyinguquko ethuthukisa ugwayi wendabuko. I-relase yetiyela, ama-carbonyls, ama-VOC, i-CO, ama-radicals mahhala noma ama-nitrosamine e-HeeChi Herbalstick iphansi kakhulu kunanoma yimuphi ugwayi. Induku ngayinye inikeza ukukhukhumala okufanayo nokubhema ugwayi ovamile, ngaphandle kwesidingo sokuwushisa. Ngosizo lwesakhiwo sezinti esithuthukisiwe, i-HeeChi Herbalstick ingagcinwa ngaphezu kwezinyanga eziyi-18 futhi kungabe kusavuza itiyela.
Izinti ze-HEECHI ezishisisa i-herbal zisebenzisa i-herbal yemvelo ekhethekile, kusetshenziswa iphunga elimnandi lendabuko, futhi ihlanganisa ukunambitheka okufana nogwayi, okudala umuzwa oyingqayizivele wokubhema.
I-PURE HeeChi Menthol, ukuthuthukiswa kwe-heatstick evamile ye-menthol. Ngokukhishwa kwemvelo kwe-mint essence namaqabunga etiye aqoqiwe, inikeza ithoni ephansi esekelwe itiye futhi igcina i-glacier ibhonga engqondweni. Umuzwa oqabulayo ongakholeki, awukwazi ukuyeka.
Ama-flavour acindezelwe kubhontshisi oqhumayo ngobuchwepheshe obuphambili, impilo ende yesitolo kanye nokuthuthuka okunamandla. Ngokuluma okulula, ungase ujabulele i-menthol ethuthukisiwe noma nini noma kuphi
Emakhulwini eminyaka kusukela kwasungulwa ugwayi emphakathini wesintu, izinto eziyingozi ezikhiqizwa ukushiswa kukagwayi ziye zaba usongo olukhulu empilweni yabantu. Phakathi kwazo, itiyela njengento eyinhloko, iholela ekubeni ababhemayo baphathwe umdlavuza wamaphaphu, isifo senhliziyo kanye nezinye izifo ezinkulu zesizathu esiyinhloko.
Imikhiqizo kagwayi ye-HNB, njengendlela entsha yemboni kagwayi, inikeza ulwazi lwentuthu olufana nogwayi wendabuko. Ngaphezu kwalokho, ivikela ama-somkers kanye nabantu ababazungezile ekukhishweni kwetiyela kanye nentuthu kagwayi. I-HeeChi herbalstick iphusha lo mkhiqizo ezingeni elilandelayo: ukufutheka okwengeziwe, ukusebenza okuzinzile nempilo ende yesitolo. Zuza ochungechungeni lwethu lwempahla eluhlaza, ukunambitheka okuhlukile kusendleleni.
Okwedlule: I-HEECHI Coffee Non-Nicotine HNB Herbal Stick
Olandelayo: I-HEECHI Evamile Ye-Non-Nicotine HNB Herbal Stick
Igama Brand: HEECHI
Igama Lomkhiqizo: I-HEECHI Mint Blast Non-Nicotine HNB Herbal Stick
Izinga Lokushisa Lokusebenza: 280°C ~ 320°C
Izinga Lokushisa Lokugcina: -20°C ~ 60°C
Ukupakishwa: 1 ibhokisi = 50reams, 1 ream = 10packs = 200stick
I-Puffs: Ngaphezu kwe-15
Usayizi we-Carton: 41 * 35 * 29cm
Iseluleko esibalulekile: Abesifazane abakhulelwe, abancelisayo kanye nezingane abavunyelwe
Isitifiketi: TPD, FDA (FOOD CONTACT),JRFL
Isicelo: Sebenzisa umshini wokushisa ongashisi
Ukushisa Ungashisi Izinti Zemithi
I-Herbalstick Eshisayo Engashi
I-Herbalstick Yogwayi Oshisayo
I-Herbal Stick Vaporizer
I-Nicotine Yamahhala Yama-Herbal Sticks
I-HEECHI Blueberry Non-Nicotine HNB Herbal Stick
I-HEECHI Tangerine Peel Non-Nicotine HNB Herbal S...
I-HEECHI Coffee Non-Nicotine HNB Herbal Stick
I-HEECHI Evamile Ye-Non-Nicotine HNB Herbal Stick
I-HEECHI Strawberry Non-Nicotine HNB Herbal Stick
Ukuphumelela Okusha ku-Heat-Not-Burn HNB Track
Ukusetshenziswa Kwentsha Yokubhema kanye Nenqubekelaphambili Yokusebenzisa Ugwayi we-E